🥇 2022 ခုနှစ် ဇွန်လ၏ အကောင်းဆုံး ကုန်သွယ်မှု ပလပ်ဖောင်းများ | အခကြေးငွေနည်းပါးစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းပလပ်ဖောင်း5ခု။
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
အကယ်၍ သင်သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေပါက ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း. လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ မြင်ကွင်း၏ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာမှုကြောင့် ယခုအခါ စျေးကွက်တွင် ရာနှင့်ချီသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ ရှိနေသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိသောအခကြေးငွေများကြောင့်ဤပံ့ပိုးပေးသူအများစုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပေးနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးသည်သင့်လျော်သည်ကိုရှာဖွေရန်အိမ်စာအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
မရေမတွက်နိုင်သောနာရီပေါင်းများစွာသုတေသနပြုရန်ဤလမ်းညွှန်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည် 2022 ၏အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်ရွေးခြယ်မှုအားလုံးသည်စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း၊ ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စျေးကွက်များနှင့်ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်သောသတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ပြန်လည်သုံးသပ် 2022 အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း
အဆင့်တစ် စည်းမျဉ်းသည် အများကြိုက်များ FCA, CySECဒါမှမဟုတ် ASIC
အထက်ဖော်ပြပါအရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများထဲမှမည်သည့်ပံ့ပိုးပေးသူများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၄။ AvaTrade - Techincal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း
AvaTrade သည် CFD စျေးကွက်များတွင်အထူးပြုသည့်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်သြဇာသက်ရောက်စေသည်။ ဤလူကြိုက်များသည့်ပံ့ပိုးပေးသူသည်သင့်အား MT4 အပါအ ၀ င်ပလက်ဖောင်းများစွာကိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Zulutrade ကဲ့သို့သောတတိယပါတီလူမှုရေးကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
AvaTrade ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်လိုပါက၊ ပံ့ပိုးသူသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်ပလက်ဖောင်းကိုပေးသည်။ သေချာတာပေါ့၊ AvaTrade ကပြည့်ပြည့်စုံစုံမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေသလိုမိုဘိုင်းကုန်သည်တွေလည်းဒီအတိုင်းထားခဲ့လို့မရဘူး။ ၎င်းကို iOS ရော Android အတွက်ပါရနိုင်သည်။
AvaTrade မှထောက်ပံ့ထားသောစျေးကွက်သည်ထောင်နှင့်ချီသောစျေးကွက်များသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ သင်တို့သည်လည်း cryptocurrencies, ရွေးချယ်စရာများနှင့်အနာဂတ်ကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် AvaTrade သည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့စေသည့်ကော်မရှင်ကင်းမဲ့သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အဓိက forex အတွဲများပေါ်တွင် ၀.၉ pips နှင့်အပြာရောင်ချစ်ပ် CFDs တွင် ၀.၁၃ ပါဝင်သည်။
AvaTrade သည်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုပေးထားသော်လည်း၊ သင်သည်ဤပလက်ဖောင်းတွင်အနည်းငယ်သာရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ငွေပမာဏကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်စတင်ပါကသင်၏အကောင့်ကို debit / credit card သို့မဟုတ် bank wire ဖြင့်ငွေထည့်နိုင်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် AvaTrade ၏ဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးတစ်ခုမှာတရားစီရင်မှုအများအပြားအတွက်လိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းတွင်ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ဥရောပ၊ တောင်အာဖရိက၊ ဂျပန်နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နိမ့်ဆုံးသိုက် $ 100
ကုန်သွယ်ရန်ကော်မရှင် - အခမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏အမှိုက်ပုံ
၃။ Capital.com - အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း
Kapital.com သည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလူကြိုက်များသောပံ့ပိုးပေးသူသည်သင့်အားမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုပြီး၎င်းသည်သင့်အနေဖြင့်ပြည့်စုံသောသရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံသို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင့်အားမည်သည့်ငွေကိုမျှမစွန့်စားဘဲအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးကြိုးများကိုသင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ Capital.com မှလမ်းညွှန်များနှင့်ဗွီဒီယိုရှင်းပြသူများကဲ့သို့သောပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထို့နောက် သင့်ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးဖြင့် အရောင်းအဝယ်စတင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု သင်ထင်သောအခါ၊ ဤနာမည်ကြီးပလပ်ဖောင်းတွင် အနည်းဆုံး စပေါ်ငွေ $20 သာ လိုအပ်ပါသည်။ သင်ကုန်သွယ်မှုလုပ်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ Capital.com သည် CFD ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတော့များ၊ ကုန်စည်များနှင့် အညွှန်းကိန်းများအပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများစွာရှိ စျေးကွက်ထောင်ပေါင်းများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ သင်သည် အဓိကများ၊ အသေးအမွှားများနှင့် ထူးခြားဆန်းပြားသော အကြောင်းအရာများစွာကို အကျုံးဝင်သည့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းဖြင့် သင်လည်း forex အတွဲများကို စုဆောင်းထားသည်။
Capital.com မှတည်ခင်း financial ည့်ခံသည့်ဘဏ္commissionာရေးစျေးကွက်တစ်ခုစီကိုကော်မရှင်မလိုပဲကုန်သွယ်နိုင်သည်။ အဓိကငွေကြေးအတွဲများနှင့်စတော့များကဲ့သို့အဓိက CFD ပိုင်ဆိုင်မှုများ - ပြန့်ပွားမကြာခဏစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရ Capital.com သည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အမိန့်များနေရာချခြင်း၏အခြေခံနားလည်မှုရှိသကဲ့သို့, သင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမဖြစ်သင့်။
ဤစာမျက်နှာတွင် ဆွေးနွေးထားသော အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများကဲ့သို့ပင် Capital.com သည် လွှမ်းမိုးမှုကို ပေးသည်။ တစ်ဖန်၊ သင်၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သင့်တည်နေရာက ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB အပါအဝင် ကျော်ကြားသောအဖွဲ့အစည်းအများအပြားမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီး စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်သည် ဤထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ပေးသူနှင့် စာရင်းသွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်သည် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ဘဏ်ဝိုင်ယာကြိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်သူတို့၏အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေနိုင်သော်လည်းအခြားသူများကမူကုန်သည်များကိုသူတို့၏အလွန်နိမ့်ကျသောအခကြေးငွေများနှင့်ပြန့်ပွားမှုများအတွက်ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏အဓိက ဦး စားပေးသည်မှာအဘယ်နည်း။
အွန်လိုင်းပေါ်မှကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်ငွေရှာနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာသင်ရွေးချယ်ထားသောပလက်ဖောင်းသို့ရန်ပုံငွေများထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ အလှည့်အနေဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အဆုံးမှယုံကြည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ အပြီးသတ်ပြောရလျှင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်သင်လိုချင်သောဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တာ ၀ န်ယူရုံသာမကသင်၏ရန်ပုံငွေများကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အနည်းဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကခွင့်ပြုပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိမှသာသင်ကုန်သွယ်ရေးစင်မြင့်ကိုသာမှတ်ပုံတင်သင့်သည်။ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်ဘဏ္stringာရေးဆိုင်ရာတင်းကြပ်ဆုံးစည်းမျဉ်းများမှာ -
အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှတစ်ခုကခွင့်ပြုပါက၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုစာအုပ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။ ထိုသို့မလုပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာထိန်းညှိသူသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာဒဏ်ငွေကဲ့သို့သောဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိလိမ့်မည်။
ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ကိစ္စရပ်များတွင်ထိန်းညှိသူသည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း၏လိုင်စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းအပြင်၊ ထိန်းညှိထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အခြားသော့ချက်ကျသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူပါလာသည်။
KYC အတွက်ဖြေ - KYC (သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ကိုသိထားခြင်း) ထိန်းချုပ်မှုတွေဟာနာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကမင်းနဲ့သင့်ကုန်သည်ချင်းတွေအတွက်ဘဏ္crimeာရေးရာဇ ၀ တ်မှုမှကင်းဝေးစေပါတယ်။ eToro ကဲ့သို့ခေတ်သစ်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအတည်ပြုလိမ့်မည်။
သုံးစွဲသူ၏ရန်ပုံငွေများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများသည်သုံးစွဲသူ၏ရန်ပုံငွေများကို၎င်းတို့နှင့်ခွဲခြားရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ငွေကိုသီးခြားဘဏ်စာရင်းတွင်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ၊ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ရန်ပုံငွေများကို၎င်း၏ကြွေးမြီများကို ၀ န်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါ။
ကြေး Transparency: စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အခကြေးငွေများ၊ သင်၏အကောင့်မှအခွန်အခများအားသင်၏ဒိုင်ခွက်မှတစ်ဆင့်အပြည့်အ ၀ ဖြိုခွဲသင့်သည်။ ဤအချက်ကသင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသောအခါသင်ပေးဆပ်နေသည့်အရာများကိုအမြဲတမ်းသိရန်သေချာစေသည်
နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်သည်စည်းမျဉ်းမရှိသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခု - သို့မဟုတ်ရိပ်မိသောကမ်းလွန်ကျွန်းတွင်လိုင်စင်ရထားသည့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လျှင်သင်၏ငွေသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ခန်းစာ (၂) ကုန်သွယ်ရေးတွင် tier-one အလွှာများကအကြီးအကျယ်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုသာရွေးချယ်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းမှ သင့်အား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည့် စျေးကွက်များတွင် ကြီးမားသောကွာဟချက်ရှိတတ်သည်။ အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အတိုချုံးဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အချို့မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားတစ်ခုတည်းတွင် အထူးပြုကြပြီး အချို့မှာ စတော့ရှယ်ယာများ၊ Forex၊ ကုန်စည်၊ cryptocurrencies နှင့် အခြားအရာများ။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုသင်ရှာဖွေရန်အထူးသဖြင့်တစ်ခုသောတစ်ခုရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ် ကုန်သွယ် CFDs ။
အထက်ပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်ရေရှည် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ဆောင်ခြင်းမဟာဗျူဟာမှတဆင့်ပြုလုပ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်သည်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူမည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတွင်ထားခဲ့ပါ၊ ထို့နောက်လပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး တည်းပိုင်ရှယ်ယာ (သို့) ရန်ပုံငွေကိုပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်, သင်သည်အမြတ်ဝေစုငွေပေးချေခွင့်ရှိသည်။ ငွေချေးစာချုပ်ကိစ္စများတွင်သင်သည်သင်၏ကူပွန်ငွေပေးချေမှု၏ရှယ်ယာခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအခကြေးငွေများကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်ဖြစ်သော်လည်းရေရှည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စီစဉ်နေစဉ် ဆက်လက်၍ အခကြေးငွေမယူသည့်ပံ့ပိုးသူကိုသင်ရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာလစဉ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်စဉ်အခကြေးငွေများဖြင့်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသင့်တော်သလိုမြင်သမျှကာလပတ်လုံးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုသင်လိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
spectrum ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်ပိုမိုခေတ်မီဆန်းသစ်သောစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအသုံးချလိုသောရေတိုကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ သင်သည်တစ်ခုအတွက်သင့်လျော်လိမ့်မည် CFD ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း။ CFDs – သို့မဟုတ် စာချုပ်များအတွက်-ကွဲပြားမှုများသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြေရာခံသည့် ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာများဖြစ်သည်။ ဥပမာဆိုပါတော့ ရှေ သက်ဆိုင်ရာ CFD တူရိယာများအတိုင်း တစ်အောင်စလျှင် $1,860 စျေးကွက်ပေါက်စျေးရှိသည်။
မှတ်မိရမယ့်အချက်ကတော့ CFDs တွေကိုသင်ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူး။ ပထမတစ်ချက်မှာသင့်အားဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများစွာနှင့်အတူပါရှိသည်။
ရွှေကဲ့သို့သော ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။ ဆီစိုးရိမ်စရာ သို့မဟုတ် သိုလှောင်ရန် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရန် မလိုအပ်ဘဲ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်
အခြားတစ်ဖက်တွင် CFD ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ရေတိုမဟာဗျူဟာများအတွက်သာသင့်တော်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CFDs ကကုန်သွယ်မှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ထားသည့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သင်ပေးရမည့်တစ်ညချင်းငွေကြေးကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အများအားဖြင့်တစ်မိနစ်သာဖြစ်သော်လည်းဤအခကြေးငွေများသည်သင်၏အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းမှပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် CFD ကုန်သည်တော်တော်များများဟာတစ်နေ့တာကုန်သွယ်ခြင်း (သို့) လွှဲခြင်းကုန်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ရောင်းဝယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုအရာများဖြင့်ငွေရှာဖွေရန်ဤပလက်ဖောင်းများသည်စီးပွားရေးတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ရာသင်ရွေးချယ်ထားသောစျေးကွက် (သို့) မဟာဗျူဟာတွင်မည်သည့်အခကြေးငွေများပေးလိမ့်မည်ကိုသင်စစ်ဆေးသင့်သည်။
အဆိုပါပျံ့နှံ့နေတဲ့အသစ်ရောက်ရှိလာသောများစွာသောအသိအမှတ်မပြုရန်ပျက်ကွက်သောသွယ်ဝိုက်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ သတိမထားမိသူများအတွက်သင်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောပစ္စည်းတစ်ခု၏“ ၀ ယ်ခြင်း” နှင့်“ ရောင်း” ခြင်းအကြားစျေးနှုန်းကွာဟမှုအမြဲရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Bitcoin ၏ ၀ ယ်ယူမှုသည်ဒေါ်လာ ၃၈၀၀၀ ဖြစ်ပြီးရောင်းဈေးမှာဒေါ်လာ ၃၇,၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤစျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်ကိုပြန့်ပွားမှုဟုလူသိများသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ရွေးချယ်ထားသော ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းသည် ပျံ့နှံ့မှု3ကို ကောက်ခံပါက၊ pips on GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်3pips ၏အမြတ်အစွန်းကို အရင်းကျေရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အလားတူပင်ငွေ CFDs ပေါ်တွင်ပြန့်ပွား 0.5% ပမာဏလျှင်, သင်ပင်ချိုးဖျက်ဖို့ 0.5% ၏အကျိုးအမြတ်အောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Learn2Trade မှပြုလုပ်သောလေ့လာချက်များအရအကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကသင့်ကို ၁ လက်ထက်မကသောအဓိကပိုင်ဆိုင်မှု Forex အတွဲများကိုကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရွှေ ၀ ကဲ့သို့သောအဓိကစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် ၀.၂၅% ထက်ပိုပြီးမပြန့်နှံ့သင့်ပါ။
ပြန့်ပွားတစ်ခုဖြစ်နေစဉ် သွယ်ဝိုက် ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများမှကောက်ခံသောအဖိုးအခများ၊ ကော်မရှင်များသည်သင်၏အကောင့်ငွေလက်ကျန်မှလွတ်လိမ့်မည်။ သင်ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ရောင်းချမှုအမှာစာကိုထုတ်ပြန်သည့်အခါဤကော်မရှင်ကျသင့်သည်။ များသောအားဖြင့်ကော်မရှင်သည်သင်၏ရှယ်ယာနှင့်တွက်ချက်သည့်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်မှုအတွက် ၁.၅% သောကော်မရှင်တစ်ခုကိုကောက်ခံပြီးသင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လောင်းလျှင်၊ စျေးသို့ဝင်ရန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သဘာဝဓာတ်ငွေ့အနေအထားကိုဒေါ်လာ ၁၁၀၀ တန်ဖိုးရှိလျှင်ရောင်းပါကသင်၏ ၁.၅% ကော်မရှင်သည်ဒေါ်လာ ၁၆.၅၀ ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါဥပမာများသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော်လည်း၊ သင်၏အကျိုးအမြတ်များ၌ကော်မရှင်များသည်လျင်မြန်စွာစားသုံးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီစာမျက်နှာမှာပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုကသင့်ကိုကော်မရှင်မပေးဘဲအွန်လိုင်းကိုကုန်သွယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီအစား၊ ဒီပလက်ဖောင်းတွေဟာအထက်ဖော်ပြပါပြန့်ပွားမှုကနေသူတို့ငွေရှာတယ်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အခြားအခကြေးငွေများပေးဆောင်နိုင်သည်။ ဥပမာ -
တစ်ညတည်းငွေကြေး အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CFD များရောင်းဝယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကတစ်ညတည်းငွေကြေးပေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏လောင်းကြေးပမာဏနှင့်စျေးကွက်အပေါ် မူတည်၍ ထိုအခကြေးငွေကိုတစ်ရက်၏သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ရရှိသည်။
ပလက်ဖောင်းအခကြေးငွေ: မဟုတ်ရင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေအဖြစ်ရည်ညွှန်း, အချို့ပလက်ဖောင်းလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အခကြေးငွေကောက်ခံ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသောပမာဏပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခ ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက်သတိထားပါ၊ ဤအရာသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမပြုလုပ်မီသင့်အားအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်မည်သည့်အခကြေးငွေများကိုကောက်ခံသည်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုပံ့ပိုးသူ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှကြည့်ရှုသင့်သည်။
အချို့သောကုန်သွယ်ဆိုဒ်များသည် အခြေခံမှတည်ဆောက်ထားသည့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းကို ပေးဆောင်သည်။ များစွာသော ကိစ္စများတွင်၊ ဤအရာများကို စတင်သူများ စိတ်ထဲတွင် ပုံဖော်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ eToro သည် အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသော မူပိုင်ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းကို ပေးဆောင်သည်။
၎င်းသည်၎င်း၏အဓိက ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်အတူပြောရလျှင် Newbie နှင့်ရင်းနှီးသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသောအခါအဆင့်မြင့်ကိရိယာများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများသို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်မှုမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အတွင်းကျကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လုပ်ဆောင်လိုသည့် ရာသီအလိုက် ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါက၊ ပံ့ပိုးပေးသည့် ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်သည်။ MT4 သို့မဟုတ် MT5 cTrader သည်အခြားရွေးချယ်စရာလည်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုခုကိုလမ်း, ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်မှု -set နှင့်အတွေ့အကြုံအကဲဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်, အချို့သောအသစ်ကလူဆီသို့ရည်ရွယ်နေကြသည်အဖြစ်အခြားသူများကိုပညာရှင်များပိုမိုသင့်လျော်သော။
ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုပူးပေါင်းတဲ့အခါစဉ်းစားရမယ့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတွေ၊ အင်္ဂါရပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဤအရာသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးခရီး၌သင့်အားကူညီရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောကတွင်ပြည့်ဝစုံလင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကလူမှုရေးနှင့်ကူးယူရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များပါ ၀ င်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် eToro သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာပုံစံကိုပံ့ပိုးပေးပြီး၎င်းသည်သင့်အားအခြား site ကုန်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်အတွေးအခေါ်များကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်ရေးသားချက်များကိုထုတ်ဝေရန်နှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားရုံသာမကသင်နှင့်သဘောတူသည့် 'ကြိုက်' သည့်မှတ်ချက်များလည်းပါနိုင်သည်။ ဤအရာသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်လူမှုရေးခံစားချက်ဖန်တီးပေးပြီးသင်ကရိုးရာအဟောင်းကျောင်းပွဲစားကိုမတွေ့ပါ။ ထို့အပြင် eToro သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်မိတ္တူကူးရေးကိရိယာတစ်ခုကိုလည်းပေးသည်။
eToro တွင်အတည်ပြုထားသောမိတ္တူကူးကုန်သည်များအားဖြတ်သန်း။ သင်ပျမ်းမျှလစဉ်အမြတ်အစွန်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့သောမက်ထရစ်များကိုကြည့်ရှုသည်
သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သည်သို့ဒေါ်လာ ၅၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
ကုန်သည်သည် ၎င်းတို့၏အစုစု၏ 7% ကို ခွဲဝေပေးသည်။ PayPal က စတော့ရှယ်ယာများနှင့် Visa စတော့များတွင် 5%
တစ်ဖန်၊ သင်သည် PayPal စတော့ရှယ်ယာများတွင် $35 ($7 ၏ 500%) နှင့် Visa စတော့များတွင် $25 ($5 ၏ 500%) ကို အလိုအလျောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
ကုန်သည်သည် ၎င်းတို့၏ရာထူးကို PayPal သို့မဟုတ် Visa ဖြင့် ရောင်းချသောအခါတွင် သင်သည် အလားတူလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
အားလုံးဟာအကောင်းဆုံးနေရာမှာအတွေ့အကြုံသိပ်မရှိဘူးဆိုရင်လူမှုရေးနှင့်မိတ္တူကူးခြင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်သင်၏လေလံဆွဲရန်အတွက်အတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အပေါ်တွင်မှီခိုအားထားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်များစွာသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရင်းအနှီးကိုလက်လှမ်းမမှီပါကရှင်သန်နိုင်သည့်အမြတ်အစွန်းရရန်အခက်တွေ့နိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ သင်တစ်လကို ၁၀% အမြတ်တိုးအောင်လုပ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်မှာလက်ကျန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ သာရှိရင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပဲရမယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်၊ သင့်မှာအကောင့်ငွေလက်ကျန်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းဟာအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ US ကုန်သည်များသည် 1:50 ကဲ့သို့သော အဓိက forex အတွဲများကို ရောင်းဝယ်သောအခါတွင် လွှမ်းမိုးနိုင်သည် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ. ဆိုလိုသည်မှာ $1,000 လက်ကျန်ငွေသည် အများဆုံး $50,000 အနေအထားကို ခွင့်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်လက်လီရောင်းဝယ်သူများအားအဓိကငွေကြေးအတွဲများနှင့် ၁.၃၀ သို့အနိမ့်ဆုံးနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလျှော့ချသည်
အခြားနိုင်ငံများတွင်မူအကန့်အသတ်မရှိရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည် ၁: ၅၀၀ ထက်ကျော်လွန်သောသြဇာကန့်သတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်
သင်သြဇာကုန်သွယ်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုနားလည်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးနောက်မှာ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်၊ သင်လည်းသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကုန်သည်များသည်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများပေါ်တွင်များစွာမှီခိုကြလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှု၊ အသံပမာဏသို့မဟုတ်မတည်ငြိမ်မှုကိုပင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ညွှန်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများသည်သင့်အားမကြာသေးမီကစျေးနှုန်းများကိုလေ့လာရန်နှင့်၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အနာဂတ် ဦး တည်ရာကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ဇယားဆွဲရေးကိရိယာများနှင့်အတူသင်တပ်ဆင်ရန်အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများစွာပေးထားသည်။
အခြားကိစ္စရပ်များတွင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများကိုယ်တိုင်မကမ်းလှမ်းနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် MT4, MT5 သို့မဟုတ် cTrader နှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကဤတတိယပါတီကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်သင်လိုအပ်မည့်အဆင့်မြင့်ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများအားလုံးနှင့်အတူလာသည်။
အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသွားမီသင်ရွေးချယ်ထားသောပံ့ပိုးသူကမည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်ကိုလည်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည် ID documents များကိုတင်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ဖြတ်၍ သွားစရာမလိုပါ။ ထို့နောက်သင်ပလက်ဖောင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေသွင်းနည်းကိုမပေးပါ။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ မမှားပါနှင့် - အကောင်းဆုံး ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် PayPal ကဲ့သို့ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ် သို့မဟုတ် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်- ကဲ့သို့သော ငွေများကို ငွေသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လုံခြုံသည်၊ လုံခြုံပြီး အရေးအကြီးဆုံးမှာ- လက်ငင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ မိုဘိုင်းလ်ကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းအက်ပ်ကို အသုံးပြုသည့်တိုင် သင်အံဝင်ခွင်ကျတွေ့သည့်အခါတိုင်း ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုအချက်နှင့်အတူအချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုသာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သွယ်ရန်ရန်ပုံငွေမရမှီရက်အနည်းငယ်လောက်စောင့်ရမည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုသည်မည်သည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်စစ်ဆေးပြီးသင်ထံမှ FX ကုန်ကျငွေကိုမျှော်လင့်ထားမထားစစ်ဆေးပါ။
ဤသည်မက်ထရစ်အထူးသဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်အကောင်းမြင်သူများအတွက်သင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်စတင်ထွက်ခွာသွားပါကထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသည်မှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုပေးသည်။
၎င်းတွင်အသေးစားသင်တန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များ၊ စျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ podcasts များနှင့် webinars များပါဝင်သည်။ ဤကုန်ကြမ်းများကိုပေးသည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်မည်သို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုသင်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြင့်စတင်ခြင်း - Walkthrough
သင်ကြည့်ရှုလိုသည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိပြီးပါကအကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းအဆင့်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Capital.com ဖြင့်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင့်အားလမ်းလျှောက်သွားပါမည်။ ၎င်းမှစတင်ခြင်းမှအဆုံးအထိ ၁၀ မိနစ်ထက်မပိုစေသင့်ပါ။
သင်ပထမ ဦး ဆုံး Capital.com ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင်၏မိုဘိုင်းဝဘ်ဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာသင်၏အကောင့်ဖွင့်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပြီးသင်၏အမည်၊ တည်နေရာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကဲ့သို့သင့်ထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
သတ်မှတ်ထားသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့် Capital.com သည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်များသောအားဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများချက်ချင်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမကြာစေသင့်ပါ။
သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူနှင့်သင်၏အိမ်လိပ်စာကိုအတည်ပြုသောစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုတင်ပါ။ ၎င်းသည် Capital.com တွင်ကုန်ကြမ်းငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်မိတ္တူများကိုလည်းလက်ခံပါသည်။
Capital.com တွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ သို့မဟုတ်သင်၏ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏အကောင့်ကိုချက်ချင်းငွေထုတ်နိုင်သည်။
Capital.com သည်ဒေသတွင်းဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများကိုလည်းပံ့ပိုးပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်နာရီအနည်းငယ်မှရက်အနည်းငယ်အထိအချိန်ယူနိုင်သည်။
အဆင့် ၄ - ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်ရှာဖွေပါ
သင်၏သိုက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်စတင်နိုင်ပါသည်။ Capital.com သည်အစုရှယ်ယာများ၊ ETF များ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ cryptocurrencies၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် Forex များရှိစျေးကွက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေရာဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤစျေးကွက်များကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ မည်သည့်စျေးကွက်ကိုသင်ရောင်းလိုသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်ပါက၎င်းကိုရှာဖွေရန်အကွက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက်ကုန်သွယ်ရေးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mastercard ကိုရှာဖွေနေသည်။
ပထမ ဦး စွာသင်ဝယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမှာစာကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Capital.com သည် box ကို ၀ ယ်ရန်အမိန့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတိုးလာမည်ဟုသင်ထင်နေသည်။ သို့သော်သင်တိုတောင်းလိုလျှင်၎င်းကိုရောင်းရန်အမိန့်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်တွင် MasterCard ၏အစုရှယ်ယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှာဖွေနေသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ရန်အမိန့်အဖြစ်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသြဇာမ ၀ င်ခြင်းကြောင့်စတော့ရှယ်ယာအားလုံးကိုလုံး ၀ ပိုင်ဆိုင်သည်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်သင်၏ရှယ်ယာဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀ ကိုရွေးချယ်နေကြသည်။ သင် crypto ရောင်းသည့်အခါ Capital.com မှာအနည်းဆုံး $ 50 သို့လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့အနေအထားကိုရိုက်ထည့်ပါ 'Open Trade' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကငါတို့ကော်မရှင် - အခမဲ့ကုန်သွယ်မှုအတည်ပြုခဲ့သည်!
မှတ်စု: ရပ်တန့်ပြီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အမြတ်ယူရန်အလို့ငှာတည်ထောင်ရန်လည်းအကြံပေးသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားရှင်းလင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိစေရန်နှင့်သင်အန္တရာယ်ရှိသည့်နည်းလမ်းဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုရန်သေချာစေပါလိမ့်မည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေရန်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မလွယ်ကူပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ရာနှင့်ချီသောပံ့ပိုးပေးသူများယခုနေရာတွင်တက်တက်ကြွကြွရှိနေသည်။ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
သင်ပံ့ပိုးသူအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသေချာစေရန်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစျေးကွက်ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်အပြိုင်အဆိုင်အခကြေးငွေပေးသည်ကိုသေချာစွာလုပ်ပြီးပါကကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များ၊ ငွေပေးချေမှုများနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုဆိုင်ရာဝန်းကျင်မက်ထရစ်ကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်၊ အွန်လိုင်းအာကာသတွင်တက်ကြွစွာအကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည် Capital.com ဖြစ်သည်။ ယခုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်၌တက်ကြွစွာကုန်သည် ၁၇ သန်းရှိသည့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပံ့ပိုးပေးသူကသင်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများကိုကော်မရှင်မှအခမဲ့ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများစွာကိုသုံးသပ်ပြီးနောက် eToro သည်လူစုလူဝေးနှင့်ကွဲပြားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သင်သည်ကော်မရှင်အနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရုံသာမကပံ့ပိုးပေးသူကိုများစွာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
eToro သည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းအားအသုံးပြုရန်ကုန်သွယ်မှုဗန်းစကားသို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးမှာနိမ့်သည်။ သင်သည်အန္တရာယ်ကင်းမဲ့သောသရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စတော့ရှယ်ယာများအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက eToro သည်နိုင်ငံတကာစျေးကွက် ၁၇ ခုတွင်ရှယ်ယာ ၂,၄၀၀+ ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျာမနီနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများမှကုမ္ပဏီများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးစင်မြင့်ကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်လိုင်စင်အဖွဲ့များကထိန်းချုပ်သည်။ အထူးသဖြင့် FINRA, FCA, ASIC နှင့် CySEC တို့၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုရှာဖွေပါ။ ထိုအဖွဲ့များသည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုမြင်ကွင်းကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်နာမည်ကောင်းရှိသည်။
အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင်ကွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများအနိမ့်ဆုံးသိုက်မူဝါဒမရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်နှင့်သင်သက်သောင့်သက်သာရှိသောငွေပမာဏဖြင့်သင်စတင်နိုင်သည်။